Magaca Hodges Hawk Mascot »Jaamacadda Hodges
Magaca Hodges Hawk Mascot!
Waxaan rabnaa caawintaada!
Waxaan leenahay Hodges Hawk sida mascot our, laakiin Hawkkeenu wuxuu u baahan yahay magac.
Tartankan wuxuu u furan yahay dhammaan macallimiinta Jaamacadda Hodges, shaqaalaha, ardayda, qalinleyda, iyo bulshada guud ahaan. Ku soo dir iimaylkaaga soo gal: Suuq- geynta.hodges.edu. Ku dar magacaaga hore iyo kan dambe, cinwaanka iimaylka, iyo hal magac oo loo yaqaan Hawk.
Xeerarka iyo Macluumaadka Rasmiga ah
Iibsasho MAYA LOO BAAHAN YAHAY IN LAGU GALO AMA LAGU guuleysto. SOO Iibsigu Kordhi maayo Fursadaha GUUL.
Eligibility: Tartankan wuxuu u furan yahay oo keliya macallimiinta Jaamacadda Hodges, shaqaalaha, ardayda iyo qalinleyda. Tartanku wuxuu u furan yahay oo keliya dadka sharciga ku deggan Mareykanka, waana wax aan waxba tarayn meeshii sharcigu mamnuucayo. Tartanku wuxuu ku xiran yahay dhammaan sharciyada iyo qawaaniinta federaalka, gobolka, iyo deegaanka. Faaruq meeshii laga mamnuucay
Heshiiska Xeerarka: Markaad kaqaybqaadato, Tartamuhu ("Adiga") wuxuu oggol yahay inuu si buuxda bilaa shuruud ugu xidho Xeerarkan, Adiguna waxaad matashaa oo aad dammaanad qaadaysaa inaad buuxisay shuruudaha u-qalmitaanka. Intaa waxaa dheer, Waad oggoshahay inaad aqbasho go'aamada Jaamacadda Hodges mid kama dambeys ah oo ku waajib ah maadaama ay la xiriirto nuxurka tartankan.
Muddada Tartanka: Gelitaanka waxaa la aqbali doonaa laga bilaabo Talaadada, Sept. 15, 2020 at 7:00 am EST waxayna dhamaan doontaa Arbacada, Sept. 30 markay tahay 11:59 pm EST. Dhammaan qoraallada waa in lagu helaa Arbacada, Sebtember 30, 2020 at 11:59 pm EST email ahaan: Suuq- geynta.hodges.edu.
Sida Loo Galo: Gelitaanku waa inuu buuxiyaa dhammaan shuruudaha tartanka, sida lagu qeexay, si uu ugu qalmo ku guuleysiga abaalmarin. Gelitaannada aan dhammaystirnayn ama aan u hoggaansamin qawaaniinta ama qeexitaannada waxaa laga yaabaa in lagu qalmo ikhtiyaarka keliya ee Jaamacadda Hodges. Waad geli kartaa hal mar oo keliya, adoo bixinaya magaca aad u maleynaysid inay tahay in Hawk University Hawk lahaado. Ma geli kartid waqtiyo ka badan inta la tilmaamay adoo adeegsanaya cinwaano badan oo emayl ah, aqoonsiyo, ama qalab iskuday ah inaad hareer marto xeerarka. Haddii aad isticmaasho habab khiyaano ah ama haddii kale aad isku daydo inaad hareer marto xeerarka, soo gudbintaada ayaa laga saari doonaa u-qalmitaanka iyadoo ay ikhtiyaar u tahay Jaamacadda Hodges.
Abaal: Ku guuleystaha tartanka wuxuu heli doonaa hal Hodges Hawk plush toy. Haddii soo-galooti badani soo gudbiyaan isla magaca guusha, markaa hal guuleyste ayaa si aan kala sooc lahayn loo dooran doonaa. Abaalmarinta lama gudbin karo. Kasta iyo dhammaan kharashyada laxiriira abaalmarinta, oo ay kujirto xadidnaan mid kasta iyo dhammaan federaalka, gobolka, iyo / ama canshuuraha deegaanka, waxay noqon doonaan mas'uuliyadda kaliya ee guuleystaha. Lama beddeli karo abaalmarinta ama wareejinta / meeleynta abaalmarinta dadka kale ama codsi lacag u dhiganta Winner lama oggola. Aqbalaadda abaalmarinta waxay u noqonaysaa rukhsad Jaamacadda Hodges inay adeegsato magaca Winner, muuqaalkiisa, iyo gelitaankiisa ujeeddooyin xayeysiin iyo ganacsi iyadoon magdhow dheeri ah la helin, haddii uusan sharcigu mamnuucin. Jaamacadda Hodges, iyada oo ku timaadda go'aankeeda, waxay ku abaalmarin kartaa in ka badan hal Hodges Hawk tooy toy ah ardayda soo gashay.
qalmay: Fursadaha guuleysiga waxay kuxirantahay tirada gelitaanka laqeybsiga ee la helay.
Xulista iyo Ogaysiiska Guusha: Ku guuleystaha waxaa soo xuli doona Golaha Fulinta ee Jaamacadda Hodges. Ku guuleystaha waxaa lagu ogeysiin doonaa emayl laba maalmood gudahood ka dib xulashada Guusha. Jaamacadda Hodges ma lahan wax masuuliyad ah guul-darraha ku guuleysta inuu helo ogeysiisyo ay ugu wacan tahay spam, email qashin ah ama goobaha kale ee amniga ama bixinta ku guuleystaha macluumaad aan sax ahayn ama haddii kale aan shaqeynin. Haddii guuleystaha aan lala xiriiri karin, uusan u qalmin, uu ku guuldareysto inuu dalbado abaalmarinta toddobo maalmood oo shaqo gudahood laga soo bilaabo waqtiga ogeysiiska abaalmarinta la diray, ama ku guuldareysto inuu waqtigiisa ku soo celiyo caddeyn dhameystiran oo la fuliyay iyo sii deynta sida loogu baahan yahay, abaalmarinta waa la waayi karaa oo waxaa lagu guuleysan karaa qof kale la xushay Rasiidka uu ku guuleysto abaalmarinta lagu bixiyo tartankan waxaa shardi u ah u hoggaansamida dhammaan iyo dhammaan sharciyada iyo xeerarka federaalka, gobolka, iyo deegaanka. XADGUDUB KASTA OO SHARCIYADAAS AH EE KU GUULEYSTA GUULEYSAHA (HODGES UNIVERSITY'S SOLE DISPRET) WUXUU KU DANBAYN DOONAA KALA QEYB GELINTA GUULEYSIGU WUXUU KU GUULEYSTAY TARTANKA, OO DHAMMAAN XAQIIQOOYINKA LAGU SAMEEYAY GUULEYSAHA SI DEGDEG AH AYAA LOOGU SOO DHAWEYN DOONAA.
Xuquuqda Aad Adigu Siisay: Markaad gasho tartankan, Waxaad mataleysaa oo aad damaanad qaadeysaa in soo galitaankaagu yahay shaqo asal ah oo qoraa ah, mana ku xadgudbayo dhinac saddexaad lahaanshaha xuquuqdiisa aqooneed. Haddii gelitaankaagu ku xad gudbo xuquuqda aqooneed ee mid kale, Waad u qalmi doontaa go'aanka keliya ee Jaamacadda Hodges. Haddii waxyaabaha ku jira gelitaankaaga lagu andacoonayo inay ka dhigan yihiin ku xadgudub xuquuq kasta oo lahaansho aqooneed ama aqooneed ee dhinac saddexaad, Waa inaad, kharashkaaga keliya, difaacdaa ama xallisaa sheegashooyinkaas. Waa inaad magdhaw ka bixisaa, difaacdaa, oo aad ka qabataa jaamacada Hodges waxyeello la'aan dacwadda, dacwadda, sheegashada, mas'uuliyadda, luminta, dhaawaca, kharashyada ama kharashka, taasoo ay u yeelan karto Jaamacadda Hodges, dhibaato, ama looga baahan yahay inay bixiso wixii ka soo baxa xadgudubkaas ama ku xad gudubka xaquuqda dhinac saddexaad.
Shuruudaha &: Jaamacadda Hodges waxay xaq u leedahay, iyada oo kaligeed ikhtiyaar u ah, inay joojiso, joojiso, wax ka bedesho ama joojiso tartanka haddii fayras, bug, faragelin aadane oo aan la oggolaan, khayaano, ama sababo kale oo ka baxsan awoodda jaamacadda Hodges ay musuqmaasuqdo ama saameyn ku yeelato maamulka, amniga, caddaalad, ama habsami u socodka tartanka. Xaaladda noocaas ah, Jaamacadda Hodges waxay ka dooran kartaa guuleystaha dhammaanba wixii u qalma ee la helay kahor iyo / ama kadib (haddii ay habboon tahay) tallaabada ay qaaday Jaamacadda Hodges. Jaamacadda Hodges waxay xaq u leedahay, iyada oo kaligeed ikhtiyaar u ah, inay ka-reebto shaqsi kasta oo fara-geliya ama iskudaya inuu fara-geliyo nidaamka gelitaanka ama hawlgalka tartanka ama websaydhka ama ku xadgudba Shuruudahaas & Shuruudaha. Jaamacadda Hodges waxay xaq u leedahay, ikhtiyaarkeeda keliya, in ay ilaaliso sharafta tartanka, in ay tirtirto codadka sabab kasta ha noqotee, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn: galitaanno badan oo isla isticmaala ka yimid cinwaanno IP kala duwan; galitaan badan oo isla kombiyuutar ah wixii ka badan taas oo ay oggol yihiin xeerarka tartanka; ama adeegsiga bots, macros, scripts, ama qaabab kale oo farsamo oo lagu soo galo. Isku day kasta oo soo-galore ah inuu si ula kac ah u waxyeeleeyo degel kasta ama u wiiqo hawlgalka sharciga ah ee tartanka wuxuu noqon karaa mid xadgudub ku ah sharciyada ciqaabta iyo madaniga ah. Haddii isku daygaas la sameeyo, Jaamacadda Hodges waxay xaq u leedahay inay raadiso magdhow illaa inta sharcigu oggol yahay.
Xadidaadda mas'uuliyadda: Markaad gasho, Waad oggoshahay inaad sii deyso oo aad haysato Jaamacadda Hodges oo aan waxyeello lahayn iyo laamaheeda, la-hawlgalayaasha, hay'adaha xayeysiinta iyo dhiirrigelinta, la-hawlgalayaasha, wakiillada, wakiillada, ku-xigeennada, shaqaalaha, saraakiisha, iyo agaasimayaasha wixii mas'uuliyad ah, jirro, dhaawac, dhimasho, lumis, dacwad, sheegasho, ama waxyeelo dhici karta, si toos ah ama si dadban, ha u horseedo dayacaad iyo in kale, laga bilaabo: (i) kaqeybgalaha noocaas ah tartanka iyo / ama aqbalaadiisa, haysashadiisa, isticmaalkiisa, ama ku takri fal abaalmarin ama qayb kasta oo ka mid ah; . (iii) helitaan la'aanta ama galaangal la'aanta wixii idaacado ah, taleefan, ama adeeg internet; (iv) faragelinta aadane ee aan la oggoleyn ee qeyb kasta oo ka mid ah geeddi-socodka gelitaanka ama Dalacaadda; (v) qalad elektaroonig ah ama bini-aadam ah oo ku saabsan maamulka Dallacaadda ama ka shaqeynta gelitaanka.
Khilaafaadka: Tartankan waxaa xukumaya SHARCIYADA Mareykanka iyo [gobolkaaga / gobolkaaga], AAN XUSHMEYN LAGA HELI KARO ISKU-DUGIDDA CARUURTA SHARCIGA Iyada oo shuruud looga dhigayo kaqeybgalka tartankan, kaqeybgalaha ayaa oggol in khilaaf kasta oo jira oo aan lagu xalin karin dhinacyada, iyo sababaha ficil ee ka dhasha ama ku xiran tartankan, waa in si shaqsi ah loo xaliyaa, iyada oo aan loo adeegsan nooc kasta oo ficil fasal ah. , gaar ahaan maxkamada ku taal [gobolkaaga / gobolkaaga] oo leh awood sharci. Dheeraad ah, khilaaf kasta oo noocaas ah, duruufo jira awgood looma oggolaan doono kaqeybgale inuu helo abaalmarino, wuxuuna halkan uga tanaasulayaa dhammaan xuquuqda, ciqaab, shilalka, ama waxyeelada ka dhalata, oo ay ku jiraan khidmadaha qareenka ee macquulka ah, marka laga reebo kharashka dhabta ah ee kaqeybgalaha ( yacni kharashyada la xiriira gelitaanka tartankan). Ka-qaybgalaha ayaa sii dhaafaya dhammaan xuquuqaha si ay u yeeshaan waxyeellooyin u tarma ama u siyaadiya.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah: Macluumaadka lagu soo gudbiyo gelitaanka waxay ku xiran tahay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee lagu sheegay websaydhka Jaamacadda Hodges. Si aad u aqriso Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, riix halkan.
Liiska guuleystaha: Si aad u hesho nuqul magaca guuleystaha ama nuqul ka mid ah Xeerarkan Rasmiga ah, u soo dir codsigaaga oo ay la socoto baqshad shaabadaysan, oo cinwaankeedu yahay cinwaanka cinwaanka: Waaxda Suuqgeynta Jaamacadda Hodges, 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, Fl 33966, USA. Codsiyada waa in la helaa ugu dambeyn Oktoobar 23, 2020.
Taageero: Kafaala-qaadaha tartanka waa Waaxda Suuqgeynta Jaamacadda Hodges, 2647 Circle Xirfad, Naples, FL 34119 USA.